Calashiga Xanjada Oo La Sheegay In Uu Caafimaadka U Fiican Yahay. - iftineducation.com
iftineducation.com – Calashiga Xanjada iyo Lubaanka ama xabagta Fooxa/beeyada, oo marar kala duwan warbixino ku saabsan faa’iidooyin caafimaad oo ku jira laga soo saaray, laakiin haddana muran ka bilaabmay oo la isku maandhaafay, ayaa warbixintii ugu danbaysay ee caafimaad daboolka ka qaaday in faa’iidooyin badani ku jiraan.
Khubaradani waxa kale oo ay xuseen in calashiga labadan shay uu faa’iido u leeyahay dadka xanuunka macaanka qaba, kuwaas oo uu kor u qaado, unugyada awooda galiya
xameetida, wax badana ka yarayn karo, ka fikirka iyo isku mashquulinta xanuunka macaanka, waxa kale oo ay u taraan inay ka yareeyaan, haraadka macaanka heerka labaad dhaliyo.
Calashiga Xanjada iyo Lubaanka ayay dhakhaatiirku ku sheegeen inuu faa’iido ka yahay oo kale, murugada iyo dareenada qulubka dhaliya ee dadka qaarkood sida habisada ugu dhaca, halka taa badalkeeda ay suura gal ka dhigaan, in garaaca wadnaha ee xad dhaafka ahi yaraado, isku miisaanaanta dhiiguna fiicnaato. Calashiga Xanjada ayay dhakhaatiirtu sidoo kale sheegeen inay leedahay ama jidhku ka helo, fir fircooni la mid ah ta uu ka helo caffeine-ta loo yaqaan, waxaanay dadka jecel jimicsiga kula talinayaan, inay saacado ka hor intaanay bilaabin jimicsiga isticmaalaan.
Ugu danbayntii waxa ay dhakhaatiirtu taladoodan caafimaad ku soo gab gabeeyeen, isticmaalka xanjada iyo lubaanka oo ay mar kale dadka xasuusiyeen inay yihiin, caado dadka dhexdiisa aan dhibaato ka lahayn, oo yar iyo wayn isku si loo wada isticmaalo, waliba calashigooda aan la isku dhibsan iyadoo aanay jirin wax cadaymo ah oo loo hayo faa’iidada caafimaad ee ku jirta sidaa awgeed ay haboon tahay, in marka qofku ogaado lafteeda uu saaxiibadiisa kale u sheego faa’iidada ku jirta.